Talaado 24 November 2020
Barnaamijka Martida: Wasiir Cabdullaahi Bidhaan Warsame
Barnaamijka Martida Makrafoonka ee toddobaadkan waxa uu ku saabsan yahay Soomaaliya oo aan laheyn ciidan badaheeda ilaaliya muddo ka badan 30 sano, awood ma u leedahay in ay iminka dib ula wareegto ilaalinta kheyraadka badeheeda?
Barnaamijka Martida: Dhallinyarada iyo Isticmaalka Mukhaadaraadka
Barnaamijka Martida Makrafoonka ee toddobaadkan waxa uu ku saabsan yahay dhibaatada isticmaalka mukhaadaraadka iyo saameynta uu ku leeyahay dhallinyarada Soomaalida eek u nool Australia.
Barnaamijka Martida: Xildhibaan Xarbi Cilmi Faarax
Barnaamijka Martida Makrafoonka ee toddobaadkan waxa uu ku saabsan yahay sahan dhowaan la soo bandhigay oo sheegaya in aragtida Islaam naceybka ay ku soo kordheyso xisbiga talada haya ee Conservative ee dalka Ingiriiska.
Barnaamijka Martida: Saameynta COVID-19 ee Bandhig Faneedyada
Barnaamijka Martida: Heshiiska laga Gaaray Hannaanka Doorashada
Barnaamijka Martida Makrafoonka ee toddobaadkan waxa uu ku saabsan yahay falanqeyn ku saabsan heshiiska ay gaareen madaxda dowladda federaalka iyo dowlad-goboleedyada dalka iyo magacaabista ra’iisulwasaaraha cusub ee Soomaaliya ee toddobaadkan la magacaabay.
Barnaamijka Martida: Doodaha ka bixista Britain ee Yurub
Barnaamijka Martida Makrafoonka ee toddobaadkan waxa uu ku saabsan yahay wadahadallada ka bixista Britain ee Midwga Yurub oo dib u bilowday. Barnaamijka waxaa marti ku ah Faarax Cali Cigaal oo ka faallooda arrimaha Britain iyo Midowga Yurub.
Barnaamijka Martida: Qurbaha iyo Kaalintooda Waxbarashada Soomaaliya
Barnaamijka Martida Mikrofoonka: Soomaalida Denmark
Barnaamijka Martida Mikrafoonka
Ku soo dhowaada Barnaamijka Martida Mikrafoonka oo ku saabsan heshiiskii ay madaxda dowladda Soomaaliya, saddex maamul goboleed iyo maamulka gobolka Banaadir ay ku gaareen magaalada Dhuusamareeb.